Fampiasana menaka mavesatra : Niampy 10 Mégawatt ny famokarana herinaratra -
AccueilSongandinaFampiasana menaka mavesatra : Niampy 10 Mégawatt ny famokarana herinaratra
Fampiasana menaka mavesatra : Niampy 10 Mégawatt ny famokarana herinaratra
28/02/2017 admintriatra Songandina 0
Nitombo indray ny famokarana herinaratry ny Jirama. Mamokatra herinaratra hatramin’ny 10 Mégawatt ny fampiasana milina iray fanindroany, izay nihodina nanomboka omaly. Efa tamin’ny volana Aogositra 2016 kosa no nampiasa milina mandeha amin’ny menaka mavesatra ny tao Mandroseza, foibe misy ireo milina mamokatra ny herinaratry ny Jirama. Efa mahatratra 20 Mégawatt araka izany ny herinaratra vokarin’ny Jirama, amin’ny fampiasana an’io Fuel Lourd io. “Efa miroso any amin’ny fampiasana angovo azo havaozina ny Jirama amin’izao fotoana. Efa Tetezamita mankany amin’izay lalana izay ny fampiasana menaka mavesatra na Fuel Lourd”, hoy ny fanazavan’ny delege jeneraly Lantoniaina Rasoloelison.
Afaka iray volana kosa no handeha indray ny milina fanintelony, hamokatra 10 Mégawatt hafa. Any amin’ny volana Aprily kosa ny milina fahefatra no hiodina, ka ho 40 Mégawatt ny herinaratra vokarin’ny Jirama, amin’ny alalan’ny fampiasana menaka mavesatra, amin’izany. Tombony lehibe ny fampiasana an’io menaka mavesatra io satria sady vita eto an-toerana no antsasa-bidin’ny “Gazoil” ny vidiny. “ Misokatra ho an’ny rehetra kosa ny tolo-bidy ho an’ny fampiasana an’io menaka mavesatra io. Ny tsara hotsipihana kosa anefa dia mahazo tombony kokoa ny fanjakana raha toa ka ny orinasa mpamokatra solika mavesatra ao Tsimiroro no mahazo ny tolo-bidy. Ny antsasa-bola miditra ao aminy mantsy dia mankany amin’ny kitapom-bolam-panjakana avokoa”, raha ny fanazavan’ny delege jeneralin’ny Jirama hatrany. Nanamafy ny tenany, fa tsy hisy intsony izany delestazy izany.
Hita ny fiovana mahery vaika tao anatin’izay amam-bolana niovan’ny tompon’andraikitra teo anivon’ny Jirama izay. Niharihary mantsy fa hay azo ampiasaina ihany ny menaka mavesatra, raha toa ka tsy nandeha tamin’izay mihitsy ny lalana ho an’ireo mpitondra teo aloha izay efa noesorina. Milalao ny mangarahara kokoa ity tompon’andraikitra vonjimaika eo anivon’ny Jirama ity, ka na ny momba ny tolo-bidy aza dia misokatra ho an’ny rehetra. Amin’ny 25 Marsa ho avy izao kosa no hifarana ny fandraisana dosie ho an’ireo izay hifaninana amin’ny toeran’ny tale jeneralin’ny Jirama.